Qormaata seensa Yuunivarsiitii: Koreen MM Abiy dursan 'salphina qormaata biyyaalessaa' qorataa jira - BBC News Afaan Oromoo
Qormaata seensa Yuunivarsiitii: Koreen MM Abiy dursan 'salphina qormaata biyyaalessaa' qorataa jira
5 Fuulbana 2019
Qabxiin seensa Yuunivarsiitii qormaata guyyota lamaan kennaman qofaan murtaa'a jedhe Ministeerri barnootaa.
Akka ministeerichi jehutti barattoonni dhaabbilee barnootaa ol-aanaa seenuuf qabxiin seensaa qormaata guyyota lamaan kennamaniin qofa akka murtaa'u ibse.
Isaanis Afaan Ingiliffaa, Aptiitiyuudii, Herrega, Ji'ogiraafii, fi Fiiziksiidha.
Sababni murtoon kun murtaa'eef qabxiin qormaataa guyyoota itti aanan kennaman akka malee ol ka'uu isaanii irraa kan ka'e akka tahe Deetaan Ministeera Barnootaa Dr Garramuu Hulluuqaa BBC'tti himaniiru.
Barattoonni Kamisaa fi Jimaata erga qoramanii booda Sambata lamaan boqotanii Wiixataa fi Kibxataa itti deebi'an.
Gosootni qormaataa boqonnaa irraa erga deebi'anii booda barattoonni qoraman irratti qabxiin daran waan ol ka'eef gosoota barnootaa guyyaa lamaan jalqabaa qofaan akka murtaa'u kan ta'e.
Qabxiin kun kan olka'eef qormaatni waan hatameefi jedhu rogeeyyiin hedduun, ministeerri barnootaa garuu kana ni haala.
Rakkoo qormaata biyyaalessaa seensa yuunivarsiitii baranaa mudate qorachuuf koreen Ministira Muummeen durfamu hundaa'ee qorachaa akka jiru Dr Garramuun himaniiru.
Kunis qormaata hatameera jedhu ilaalchisee maaltu akka ta'ee fi eenyu harka akka keessa qabu qorachuufi jedhan.
Koricha keessatti ministeera barnootaa irraa illee namni akka hin hammatamne kan himan Dr Garramuu Hulluuqaa dhimmichi qaama walaba taheen akka qoratamuuf akka tahes himaniiru.
Qormaatni guyyaa Wiixataa fi Facaasaa irra kennaman rakkoo akka qaban himanii seenaa biyyattii keessatti qabxii galmaa'ee hin beeknetu argame jedhan.
Innis barattotni karaa sirrii hin hojjenne hanga 100tti akka galmeessan himanii kun ammoo barattota kaan irratti carraa cufuudha jedhan.
Dabalataan biyyaa fi qulqullina barnootaa waan miidhuuf murtoo kana dabarsuuf dirqamneerra jedhan.
Kanaaf qormaatni guyyota lamaan jalqabaa kennaman ammoo hannaaf akka hin saaxilamne himanii yaada murtoo dhiyaatan biroos qaama mootummaa fi naannolee waliin mari'achuun kan fooyyee qabu kami jechuun murtoon darbuu BBCtti himan.
Naannoleen bu'aa qabxii jalqabaa irratti mormii qaban ibsaa kan turan yoo tahu murtoo ammaa kana keessatti garuu waan hirmaataniif sirriitti hubatanii fudhataniiru jedhan.
Naannoon Amaaraa dogongorri qormaata irratti mudate akka sirratu gaafate
Qabxiin seensa Yuunivarsitiis dhiyootti akka murtaa'u ibsanii Ejensiin qormaata biyyaalessaa barattota meeqatu yuunivarsiitii galaa fi qabxii meeqaa ol kan jedhu bor irraa eegalee murteessuu danda'a jedhan.
Qabxii qormaata biyyaalessaa ilaalchisee dogongorri waan uumameef komii ka'e simachuun sirreeffama akka taasise Ejensiin qormaata biyyaaleessaa beeksisee ture.
Bara kana qabxii ol-aanaa jedhamee kan ibsame barataa naannoo Amaaraa yoo tahu innis qabxii 645 tahuutu himame.
Sirreeffama qabxii taasifameen booda jijjirraan qabxii jiraachuun garuu hanga ammaatti hin ibsamne.